Mkpa ezigbo ụtọ asụsụ na akara edemede na ịde blọgụ | Martech Zone
Ndị maara m maara na m nwere ike ịbụ ntakịrị nke ụtọ asụsụ na akara edemede geek. Ọ bụ ezie na agaghị m aga n'ihu iji gbazie ndị mmadụ n'ihu ọha (naanị m na-agwa ha okwu na nzuzo), amaara m ka m dezie akara ngosi nwere okwu na-ezighi ezi, ndị na-atụgharị uche na ndị na-ezighi ezi.
Yabụ, ekwesighi ịsị, m na-agbalị mgbe niile ijide n'aka na ederede m ga-abụ snuff grammatical.
“Ọbụna na blọọgụ?”
Ee, ọbụlagodi na blọọgụ.
“Ma o kwesịrị ịbụ na blọọgụ ga-abụ n'oge na-adịghị anya na mkparịta ụka.”
Ọ bụghị dị ka i nwere ike iche. Enwere otutu ulo oru ndi nabatara ịde blọgụ, ma ha na-anwa igosipụta ntụkwasị obi na ntụkwasị obi. Ma kwenye ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị ahịa ga-ekpebi ikike ụlọ ọrụ niile nwere ike ime ọbụna isi ọrụ ya kachasị mkpa na ụtọ asụsụ na nsụgharị nke otu ọkwa dị ala nke PR.
“Yiw, me Nyankopɔn, medɔ wo! Anyị agaghịzị azụta ngwaahịa gị ọzọ! ”
Ekwetaghị m? Lezienụ anya n'okwu ọ bụla na blog ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge ntuli aka ndị isi.
Ọ bụ ezie na ịkwesighi iwepụ ụdị ndị ahụ (ọ dị mkpa ka ha kwụsie ike kama), ịkwesịrị ịkọwapụta onyonyo nke iru eru na ọkachamara. Nke ahụ pụtakwara na ị ga-asụpe okwu nke ọma, ma jiri ụtọ asụsụ na akara edemede kwesịrị ekwesị.
Mgbe ụfọdụ, m ga-eziga Doug a DM maka ụfọdụ ndegharị na-ezighi ezi ma ọ bụ okwu a na-edeghị ede na otu n'ime teknụzụ Azụmaahịa ya (nke na-ele anya ma eleghị anya kpatara ya Ana m ata m ahụhụ A gwara m ka m dee edemede a).
E nwere ọtụtụ nke ụtọ asụsụ na, ọ bụrụ na ị na-eme ha, hoo haa na-eme ka ị daa ogbi (Okwu Copyblogger, ọ bụghị nke m). Ihe ndị dị ka ya vs. ọ bụ na ị na vs. gị bụ njehie ị kwesịrị ịmara karịa karịa ime.
Ọtụtụ mmadụ ga-asị na ụtọ asụsụ na mkpoputa na blọọgụ adịghị mkpa. Na anyị kwesiri ịbụ ndị na-ezighi ezi ma debe azụ, yana na ọ nweghị ihe ọ bụla.
Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ nke gị gbasara ndụ gị, yana ị na-atụ anya ka ndị enyi ole na ole gụọ. Nwere ike ịbụ ọhụụ dịka ịchọrọ, mehie ihe na ọchịchọ obi gị, ọbụnakwa jupụta posts gị u yetụ iyi na-enweghị isi-ma-na-atọ ọchị. (Na-ele anya ị, Bloggess ahụ.)
Mana ọ bụrụ na ị na-ekwu maka azụmahịa gị, ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, ịkwesịrị idobe ihe niile dị ọcha na enweghị ntụpọ ka o kwere mee.
O bughi nmehie ma ihie uzo. Ọtụtụ oge m mehiela na blọgụ m, ọkachasị ebe m na-ekwu maka mkpa ezigbo ụtọasụsụ na akara edemede. Mana enwere m ike ịlaghachi azụ ma hichaa ya. Nke ahụ bụ nnukwu ihe gbasara ịde blọgụ: ọ nweghị ihe na-adịgide adịgide, dịka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ broshuọ. Ọ bụ a static, ndụ akwụkwọ. Omume posts ndị dị afọ atọ.
N’ihi ya, i mejọọ ihe ma ọ bụ abụọ, adala mbà. Mee ka onye ị tụkwasịrị obi lelee ha anya ma nye gị nzaghachi ziri ezi. Weghachite ma mezie ihe ọ bụla i chefuru n’oge di na nwunye mbụ gị nke idezi.
N'ihi na n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighi ezi, ndị nitpickers nọ n'ebe ahụ. Ha na-abịakwara gị.
Tags: grammarakara edemedeWriting
Ezigbo Amaokwu AT&T
Feb 6, 2010 na 11:54 PM
Enweghị m ike ịkọwapụta ekele m nwere n'anya gị maka ịchọta njehie m! M na-edekarị na mmiri nke nsụhọ ma na-ele ihe m mejọrọ ka m na-eche dị mfe dị ka mgbe m dere ha. Ọ bụ ntakịrị ọnụ. Daalụ ịdị mma maka ndị enyi!
Mgbe m bara ọgaranya na ama, m ga-akwụ gị ụgwọ! 😀